युगसम्बाद साप्ताहिक - आर्थिक संकटको ढाकछोप
Tuesday, 04.07.2020, 10:41am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 05.24.2011, 06:29am (GMT+5.5)
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा युवराज खतिवडाले सरकारको राजस्व, खर्च, बजेट घाटासहित समग्र सरकारी वित्तीय स्थिति नियन्त्रण बाहिर नरहेको प्रष्ट गर्नुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गत बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर डा खतिवडाले मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल आर्थिक संकटको सम्भावना नरहेको पनि दावी गर्नुभयो । उता मुलुकको अनिश्चित राजनीतिक भविष्यसंगै उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थाको विश्लेषण भने गर्नुभएको पाइएन । अर्कोतिर चालु आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता ९९ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य गरिएकोमा जम्मा २० अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व १४÷१५ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएको र खर्च पनि सोही अनुपातमा भएकोले हाल बजेट घाटा नभएको र त्यसको असर मौद्रिक क्षेत्रमा नपरेको दावी उहाँको थियो ।
वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको अवस्था आठ महिना बढीको वस्तु आयातलाई धान्नसक्ने बताउँदै डा. खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत हाराहारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर चार प्रतिशतभन्दा माथि रहेकोले यसबाट प्रतिव्यक्ति आयमा सुधारको अवस्था देखिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । यी तथ्यहरूलाई आधार मान्ने हो भने मुलुक आर्थिक दृष्टिले फड्को मार्दैगरेको देखिन्छ । तर गरिबी बढेको बढ्यै छ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको भनिए पनि खाद्यान्न अभाव हुने जिल्लाहरू बढिरहेका छन् । जनताको आर्थिकस्थिति सुधार आयो भनिन्छ तर जनता गाँस कटौती गर्न विवाश छन् ।
मुलुकको समग्र आर्थिक परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण हुने प्रवृत्ति नै छैन । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको तथ्यांकलाई कुनै निजी क्षेत्रले उल्टाइदिन सक्छ । सबैको आ–आफ्नै स्वार्थ अनुसारको प्रतिवदेन तयार गरिने प्रवृत्ति बढेका कारण राष्ट्र बैकका लागि पनि मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा दातृ निकाय र राष्ट्रहरूले चाहेको जस्तो प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको एउटै कारण भनेको आर्थिक सहायता र अनुदानका लागि हात फैलाउनु मात्र हो ।
अर्कोतिर मुलुकको समग्र आर्थिक परिसूचकहरू संकटतिर उन्मुख नभए पनि मजबुत नरहेका कारण कुनै पनि बेला संकट उत्पन्न हुनसक्छ । कृषि उत्पादनको वृद्धिले हुने प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिलाई सकारात्मक मान्ने हो भने त्यही कृषिमा श्रम गर्नुपर्ने तीसौं लाख युवा विदेश पठाइएको सन्दर्भलाई कसरी हेर्ने ? रेमिट्यान्सले प्रतिव्यक्ति आय बढाएको र जीवनस्तरमा सुधार गरेको पक्कै हो तर यसलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउन सकिएको छैन । विदेशबाट भित्रिएको यत्रो पूँजी आयातमै ठिक्क हुन्छ । मुलुकमा उठेको राजश्वले पेट्रोलियम पदार्थ किन्न मात्र पुग्छ भने विकास निर्माण लगायतका कामका लागि विदेशीकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । विकास–निर्माणमा जतिसुकै सन्तोष गर्ने अवस्था रहेको दावी तथ्यांकमा गरिए पनि ९९ अर्ब वैदेशिक सयहाताको दावी गरिएकोमा हालसम्म २० अर्ब रुपैयाँ मात्र प्राप्त हुनुलाई कसरी सकारात्मक मान्ने ?